Kenya Oo ku Hongowtay Qaraar ka Dhan ah Soomaaliya Oo ay Hor-gaysay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay. – Xeernews24
War naga soo gaadhay xarunta Qaramadda Midoobay ee magaalada New York ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay si rasmi ah ugu fashilantay ololihii ay ka wadday halkaas ee ku aaddana qaraarka tirsigiisu yahay 1267 ee lagu beegsanayey danaha umadda Soomaaliyeed.
Kenya ayaa dooneysay in ururka Al-Shabaab lagu daro qaraarka 1267, si ay taas uga faa’iideysato inay cunqabateyn ku saarto Soomaaliya, islamarkaana ku beegsato hantida ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeed, iyo sidoo kale shaqsiyaadkii ay doonto.
Qaraarkan oo golaha ammaanka uu ansixiyey 15-kii October ee sanaddii 1999-kii ayaa diidaya in wax gargaar ah la gaadhsiiyo deegaanada ay maamulaan koox kasta oo qaraarkan lagu daro, taasi oo haddii ay dhici lahayd diidi lahayd in dad badan oo ku dhibaateysan deegaanda ay maamulaan Al-Shabaab gargaar la gaadhsiiyo.
Danjiraha Soomaaliya ee QM Abuukar Daahir Cusmaan, in Al-Shabaab lagu daro qaraarkan ayaa waxaa diiday lix ka mid ah 15-ka dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka, oo laba ka mid ah ay yihiin xubnaha joogtada ah. Dalalka diiday ayaa kala ah: USA, France, Belgium, Germany, Poland iyo Kuwait.
Waxaa loo baahnaa kaliya inuu diido hal dal, si qorshaha Kenya ee ku-darista Al-Shabaab uu u fashilmo, hase yeeshee dadaal aan kala joogsi lahayn oo uu sameeyeen madaxda dowladda, gaar ahaan danjiraha Soomaaliya ee QM Abuukar Daahir Cusmaan, ayaa lagu xaqiijiyey in ku-darista Al-Shabaab ee qaraarka 1267 ay diideen lix dal.
Kenya ayaa sidoo kale haddii qaraarkan lagu dari lahaa Al-Shabaab uga faa’iideysan lahayd in shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ku beegsato, haddii ay lacago gaadhsiiyaan shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Arrintan ayaa ku soo beegantay maamo yar uun ka hor balanta la wada sugi ee ah ariinta bada Soomaaliyeed iyo maxkamada caalamiga ee magaalada Den-hag oo Soomaaliya laga rajayn in ay guul la taaban karo uga soo hoyan doonto.
Hagar daamooyinka lagu sameeyay gobolka Shiniile. Yemen: Xoogagga dawladda oo dib u qabsaday magaalada Cadan.